Speedsọ nzipụta: ndị debanyere 100-500 kwa ụbọchị.
Ee, anyị nwere ike ịnapụta karịa ndị debanyere aha 10,000! Anyị na-enye ndị debanyere aha 10,000 dị ka ọnụọgụ kachasị mmadụ nwere ike ịzụta na ibe a maka ọtụtụ ebumnuche, mana ọ nweghị onye metụtara ikike anyị ịnapụta ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ndị debanyere aha 100,000 ma ọ bụ ọbụlagodi 1 nde, anyị nwere ike ịnapụta ha, mana ọ ga-adị oke ọnụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụta ihe karịrị ndị debanyere aha 10,000, biko kpọtụrụ anyị ma kọwaa oke mmasị ị chọrọ ịzụ.
Mgbe ịzụrụ ndị debanyere aha YouTube n'aka anyị, nsonaazụ na-amalite ịpụta na ọwa gị n'ime awa 24-72 mgbe etinyere iwu gị wee pụta na-aga n'ihu kwa ụbọchị. Anyị na-ebuga na ọsọ nke ihe ruru 100 ka 500 ndị debanyere aha kwa ụbọchị. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị nye iwu ndị debanyere aha 1,000, ị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-ewe ruo awa 72 iji bido ma gbakwunye ụbọchị 2-3 iji wepụta ha zuru ezu. Ka ndị debanyere aha ịzụrụ, ọ ga-ewe ogologo oge iji wepụta usoro gị zuru ezu.